अब हरेक प्राविधिक स्कूलले रणनीतिक योजना बनाउनै पर्छ | Aaja ko Shiksha
अब हरेक प्राविधिक स्कूलले रणनीतिक योजना बनाउनै पर्छ
डा.रामहरि लामिछाने, डाइरेक्टर जनरल, कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज, मनिला, फिलिपिन्स
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) र फिलिपिन्सको मनिलास्थित कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज (सिपिएससी)को संयुक्त आयोजनामा भर्खरै सानोठिमी भक्तपुरमा ‘स्ट्राटेजिक प्लान फर म्यानेजमेन्ट एक्सिलेन्स’ तालिम सम्पन्न भएको छ । विशेषगरी, सिटिइभिटिका अधिकारी र यसअन्तर्गतका प्राविधिक स्कूलहरुका प्रिन्सिपलहरुलाई आफ्ना प्राज्ञिक संस्थाहरुको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाउन यो तालिम केन्द्रित थियो । सिटिइभिटिकै सदस्य–सचिवसमेत भइसक्नुभएका डा. रामहरि लामिछाने तीन वर्ष अघि फिलिपिन्सको मनिलास्थित कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज (सिपिएससी)को महानिर्देशक हुनुभएको थियो । प्रस्तुत छ, तालिम दिने क्रममा काठमाडौंमा आउनुभएका डा. लामिछानेसँग आजको शिक्षाले गरेको कुराकानी ।
‘स्ट्राटेजिक प्लान फर म्यानेजमेन्ट एक्सिलेन्स’ भनेर तालिम दिइरहनुभएको रहेछ । यो कस्तो खालको तालिम हो र किन आवश्यक छ ?
यो कार्यक्रम कोलम्बो प्लान स्टाफ (सिपिएससी) मनिला र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)को संयुक्त आयोजनामा सिटिइभिटिको केन्द्रीय कायर्।लय र यसअन्तर्गतका टेक्निकल स्कूल र पोलिटेक्निक्सहरुको ‘क्वालिटी एक्सिसलेन्स म्यानेजमेन्टको लागि स्ट्राटेजिक प्लान डेप्लोपमेन्ट’ अर्थात् ‘स्ट्राटेजिक प्लान फर म्यानेजमेन्ट एक्सिलेन्स’ भन्ने शीर्षकमा सिद्धान्तका अतिरिक्त प्राक्टिकल एप्रोचमा दिइएको एउटा तालिम कार्यक्रम हो । यो सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुका प्रिसिन्पलहरुलाई दिइन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो तालिम पछि हरेक संस्था र सिटिइभिटि केन्द्रको आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नै रणनीतिक योजना होस् । तालिमको अन्तिम दिन पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने र हरेक स्कूलको आफ्नै रणनीतिक ड्राफ्ट प्लान तयार हुन्छ । त्यसपछि आफ्नो संस्थामा गएर सरोकारवालासँग बसेर उहाँहरुले अन्तिम मस्यौदा एक महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ड्राफ्टलाई सिटिइभिटिमा बुझाउने र सिटिइभिटिले पनि केन्द्रको रणनीतिक योजना बनाउने मुख्य उद्देश्य हो । यसले गर्दा आगामी पाँच वर्षमा नेपालको टिभेट प्रणालीलाई कहाँ लैजाने ? हरेक इन्स्टिच्युटले कतिजना उत्पादन गर्ने ? कस्ता–कस्ता विषयमा गर्ने ? बजारको माग के–केमा छ ? भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । किनभने, यसमा ‘प्रब्लम ट्रि एनालाइसिस’, ‘अब्जेक्टिब ट्रि एनालाइसिस’, ‘सोट एनालाइसिस’ गरेर यसको भिजन, मिसन, गोल अब्जेक्टिब, स्ट्राटेजी र एक्सन प्लानसहित संस्थागत विकास योजना पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि पाँच वर्षका लागि के–के पूर्वाधार बनाउने भन्ने हो ।
रणनीतिक योजना बनाउँदा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर प्राप्तिमा ध्यान कतिको दिइएको छ ?
प्राविधिक स्कूलमा पहुँच र बिस्तारको मात्र कुरा गर्ने तर गुणस्तर सुनिश्चितता नहुने हो भने त त्यो अर्काे बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्छ । भन्नेचाहिँ प्राविधिक स्कूल तर गुणस्तरीय पूर्वाधार भएन र योग्य शिक्षकले तालिम दिएन भने त त्यहाँको उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । अनि त्यहाँ निराशा मात्र जन्मन सक्छ । किनभने, साधारण शिक्षामा भन्दा यसमा बढी खर्च भएको हुन्छ । त्यसकारण गुणस्तर सुनिश्चितताको योजना हरेक शिक्षण संस्थाको हुनै पर्छ । यसका लागि रणनीतिक योजना बनाउनु पर्छ । रणनीतिक योजनाले के केन्द्रित गर्छ भने अहिले हामी कहाँ छौं, पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने हो र त्यहाँ कसरी पुग्ने ? भन्ने तीनवटा प्रश्नको उत्तर खोज्छ । त्यो बनाइसकेपछि कुन–कुन पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो ? जस्तो कि के–के विषयहरु सञ्चालनमा छन् ? कुन विषय बढी थप्नुपर्ने हो ? भन्नेमा प्रष्ट हुन सकिन्छ । मानौं, ‘इनोभेसन ।’ अहिले संसारचाहिँ इनोभेसन र टेक्नोलोजीमा गइरहेको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजी । डिजिटल टेक्नोलोजी आइरहेको छ, हामीचाहिँ पुरानै सय वर्ष पछिको प्रविधिमा छौं । पूर्वाधारमा इन्टरनेट, डिजिटल टेक्नोलोजीसहित नेपाललाई सुहाउँदो प्रविधि पनि हुनु पर्यो । अन्तको ठूला कुरा गरेर पनि भएन । यी सबका लागि पाँच वर्षे एउटा योजनाबद्ध रणनीतिक योजना चाहिन्छ ।
तपाईँले यो तालिम पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाउनका लागि भन्नुभयो, यस अघि पनि त सिटिइभिटिले रणनीति बनाएकै हो । यस अघिको र अब बनाउन खोजिएको रणनीतिमा तात्विक फरक के छ ?
सिटिइभिटि केन्द्रको राष्ट्रियस्तरमा सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मको रणनीतिक योजना थियो । जुन म पहिला यहाँ काम गर्दा नै बनेको हो । अब २०१८ त दुई महिना पछि सकिँदैछ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको योजना त हुनु पर्यो नि । नत्र कसरी अघि बढ्ने सिटिइभिटिले ? के–के नयाँ इन्टरभेन्सन गर्ने ? कहाँ–कहाँ म्यापिङ गर्ने ? एउटा रणनीतिक योजना त हुनु पर्यो । अहिलेसम्म सिटिइभिटिको ८/१० वटा बाहेकका स्कूलमा रणनीतिक योजना छैन ।
अर्काे कुरा, पहिलाको रणनीतिले पनि अब हुँदैन । अहिले त प्रान्तीय, संघीय संरचनाको अवधारणामा जाँदा परिवेशसँग कार्यक्रम पनि बदलिनु पर्यो नि । अब त संघीय संरचनामा प्रान्तीय सरकार, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सिटिइभिटिको स्कूलले प्रान्तीय र स्थानीय त्यहाँको आवश्यकता के–के हो ? जस्तै, जुम्लाको खलंगा नगरपालिकाले त्यहाँको उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न यो–यो इन्टरप्राइज विकास गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो इन्टरप्राइजमा काम गर्ने प्राविधिज्ञ त प्राविधिक शिक्षालयले बनाइदिनु पर्यो । तर, टेक्निकल स्कूलहरुचाहिँ उही पुरानै कोर्ष सिभिल डिप्लोमा, एग्रिकल्चर डिप्लोमा, एग्रिकल्चर लाइभस्टक र अनमि चलाएर मात्र रहेका छन् । यसरी त हुँदैन । जस्तै, जुम्लाको मार्सी चामल अहिले धेरै प्रख्यात भएको छ । जुम्लाको अन्नबाट नयाँ उत्पादन बन्न सक्ला त ‘भ्यालु एड’का रुपमा ? कोदो र फापरको रोटी बनाएर कम्तिमा ५ नं प्रदेशमा खान दिन सकियो भने किन नेपालगञ्जबाट पाउरोटी लैजाने ? त्यो कुरा त प्रविधिले सिकाउनु पर्यो नि । त्यहाँको सरकारको चाहना पनि त त्यहीँे होला । हामीले त्यो प्रोग्रामलाई पनि लक्षित गरेर स्थानीयस्तरका इन्स्टिच्युटहरुको ‘कम्पिटिटिभ एड्भान्टेज’ केमा छ ? के कोर्ष चल्ला ? कस्ता–कस्ता सर्ट टर्मका कोर्ष चलाउँदा बढी फाइदा हुन्छ ? कस्ता–कस्ता डिप्लो चलाउने ? एक वर्षे वा दुई वर्षे, कस्ता–कस्ता प्रफेसनल कोर्ष बनाउने ? जस्तै, जुम्लामा स्याऊ छ । मुस्ताङमा ब्रान्डी वाइन छ । स्याऊबाट बन्ने नयाँ उत्पादन जुस नै किन नबनाउने ? कम्तिमा ५ र ६ नं प्रदेशलाई मात्रै स्याऊको जुस दिन सकियो भने त ‘अष्ट्रेलियाको जुसचाहिँ ५ नं प्रदेशमा निषेध गर्छाैं, हामी लोकल जुस नै खाने’ भनेर महत्व दिनेखालको रणनीतिक योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
कोलम्बो प्लानको कुरा गरौं । यसमा विभिन्न देशका सिटिइभिटिहरु सम्मिलित रहेछन् । नेपालसँग यसको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ?
जब विश्वमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद ढल्यो, कमन्वेल्थ देशहरु बने । त्यहीँ हिसाबमा ब्रिटिसले विभिन्न देशमा उपनिवेश हटेपछि सन् १९५३ मा श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा कोलम्बो प्लान अफिस स्थापना ग¥यो । त्यो एकैचोटी चलाउँदा त्यहाँ मान्छेसँग टेक्नोलोजी भएन, टेक्निसियन भएनन् र सहयोग भएन भनेर कोलम्बो प्लान सेक्रेटरियट नै बनाइयो । तर, त्यसको २० वर्ष पछि १९७३ मा उनीहरुले के ठाने भने ‘ओहो ! हामीले समन्वय गर्ने संयन्त्र त बनायौं तर टेक्निसियन नै रहेनछ’ भनेर एसिया प्यासिफिकका देशहरु मिलेर सिङ्गापुरमा कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हरेक देशमा टिभेट सेक्टरमा पढाउने शिक्षकहरु, प्रफेसनलहरु उत्पादन गर्ने हो । १९८७ मा सिङ्गापुरबाट यो अफिस मनिलामा सर्यो । अहिलेसम्म सक्रिय सदस्य देश १६ वटा र चार्टर १० वटा छन् । यसमा एसिया प्यासिफिक देशहरुचाहिँ सक्रिय छौं । अहिले सिटिइभिटिसँगको कुरा गर्दा कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेजको नेपालमा सम्बन्धित अफिस सिटिइभिटि हो, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत । कोही देशमा श्रम मन्त्रालय छ, कुनै देशमा टिभेट विभाग छ । कहीँ शिक्षा मन्त्रालय त कोहीमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ । जस्तो सिङ्गापुरमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ ।
प्राविधिक शिक्षकहरुलाई उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा रहेछ । नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा छन् तर के चुनौती छ भने त्यहाँ शिक्षक, प्राविधिज्ञ र प्रशिक्षक छैनन् । सरकारसँग कोलम्बो प्लानले प्रविधि जानेको शिक्षक उत्पादनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छ ?
अवश्य गर्न सक्छ । कोलम्बो प्लानले शिक्षक उत्पादनभन्दा पनि प्राविधिकलाई शिक्षण पेडागोजी सिकाउने हो । नेपालको अहिले प्राविधिक क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव छ तर हामीसँग एग्रिकल्चर, हेल्थ, इञ्जिनियर ग्रयाजुएट छन् । तिनलाई हाम्रो टिआइटिआइले गर्ने काम जस्तै यदि सरकारले अतिरिक्त रुपमा यति जना शिक्षकलाई यो विषयमा सहयोग गर्नुपर्यो भनी प्रस्ताव गर्यो भने सहकार्य हुन्छ । जस्तो, पाठ्यक्रम विकासमा, तालिममा, इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनमा, पाठयोजना, पेडागोजिकल सीप वा प्रस्तुति सीप अथवा अप्रेन्टिसिपमा हो कि ? यस्तोमा सरकारसँग अतिरिक्त बजेटमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो नियमित बजेटबाट चाहिँ एउटा देशमा एउटा कार्यक्रम चलाउँछौं । यो चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमचाहिँ मार्चमा हुन्छ । इन्डस्ट्री इन्स्टिच्युट लिङ्केजमा शिक्षकहरुलाई तालिम छ । टिभेटमा रिसर्च गर्छाैं र त्यसलाई सरकारलाई सेयर गर्छाैं । जस्तै, भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय कन्फेरेन्स भयो । ‘इनोभेसन इन टिभेट’ भनेर ३० देशका उद्योग क्षेत्रका द्विग्गज व्यक्तिहरु यहाँ जम्मा भएका थिए । अरु देशमा टिभेटमा कस्ता प्राविधिक विकास भएका छन् ? जस्तै ‘इन्डष्ट्रियल रिभोलुसन ४’ भनिन्छ । इन्डष्ट्रियल रिभोलुसन ४ भित्र डिजिटल टेक्नोलोजी, रोबर्ट टेक्नोलोजी रहेको छ । भनिन्छ, अबको १५ वर्षमा अमेरिका र चीनमा ड्राइभरहरु हुने छैनन् । सबै ड्राइभरहरु बिस्थापित हुनेछन् । भनेपछि अब ड्राइभर उत्पादन गरेर भयो त ? कस्तो मान्छे चाहियो भने त्यो गाडीलाई कमाण्ड दिने । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डिजिटल टेक्नोलजी रोबर्टलाई कमाण्ड दिने मान्छे चाहिन्छ । चीनमा २० हजार रोबर्ट आर्मी छन् । अमेजन डट कम वेयर हाउसमा ४५ हजार रोवर्टले काम गर्छन् । मान्छेले गर्ने काम रोबर्टले गर्छ र रोबर्टलाई चलाउने कार्यचाहिँ मान्छेले गर्ने हो । संसार त्यतातिर गइसकेको छ । हामी त धेरै पछि छौं । हाम्रोमा धानिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै पर्यटनका जनशक्ति चाहिन्छ भने ट्राभल टुर अपरेटर उत्पादन गरेर हुँदैन । अब त अनलाइनबाटै त्यहीँ प्राइज किन्न सकिन्छ, टिकेटिङ त्यहीँ हुन्छ । त्यस्तो डिजिटल कम्पिटेन्सी भएको व्यक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बेला आयो अब । यस्ता कुराहरु परम्परागत शिक्षकहरुलाई अतिरिक्त नयाँ प्रविधिको सीप दिनुपर्ने हुन्छ । अब त कम्प्यूटरबाट थ्रिडि सिस्टम छ । अब ल्याबमा मेसिन नै चाहिँदैन । गाडीको पांग्रा बिग्रियो भने कुन बेरिङ टुट्यो भन्ने डिजिटल प्रविधिबाटै हेर्न सकिन्छ । यसखाले थ्रिडि प्रविधियुक्त पूर्वाधार बनाउनु पर्यो नेपालका प्राविधिक स्कूलहरुले । नेपाल पछि पर्नुको कारण नै प्रविधिलाई नबुझ्नु नै हो । हाम्रो काम भनेको सरकारलाई नीति बनाउन सहयोग गर्नु हो ।
तपाईँ कोलम्बो प्लानमा जानु भएपछि नेपालले कस्तो फाइदा लिन सकेको छ ?
एउटा कार्यक्रम हुने ठाउँमा दुई–तीनवटा भएका छन् । नेपालमा दुई वर्षमै तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम भएका छन् । सहभागिताका हिसाबले पनि नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले बाहिर गएर प्राविधिक विषयमा जान्न पाएका छन् ।
कार्यक्रमहरु त भए हुनु र यहाँका व्यक्ति बाहिर जानुभन्दा पनि ठ्याक्कै उपलब्धिचाहिँ के–के भएका छन् ?
उपलब्धि त शिक्षण स्तरमा भएका छन् । नीतिगत कुरा त हामीले दिने हो तर ग्रहण गर्ने मान्छे र नीति बनाउनेले यसलाई लिनु पर्यो नि । हामीले टेक्नोलोजी चाहिन्छ भनेका छौं । त्यो भएको छैन । टिभेटको कुरा गर्ने अनि ल्याबविनाको प्राविधिक स्कूल खोलेर हुन्छ र ?
तुरुन्तै कोलम्बो प्लान र सिटिइभिटिसँग जोडिएर केही नयाँ काम हुँदैछ कि ?
आउने मार्चबाट ‘इन्डस्ट्री इन्स्टिच्युट लिङ्केज’सम्बन्धी कार्यक्रम हुँदैछ । सिटिइभिटिका अधिकारीहरुलाई एक्सपोजर भिजिट गराइ नै रहेका छौं । अर्काे कुरा, सीप परीक्षणको स्टाण्डर्ड तय गर्न फिलिपिन्सलाई आधारित बनाएर काम गरिँदैछ ।